Khibradeyda Riseup.net | Laga soo bilaabo Linux
@Jlcmux | | Kuwa kale
Waxaan qiyaasayaa in qaar horeba u yaqaaneen adeegga riseup.net
Kor u kacaan asal ahaan waa shabakad adeegyo u jahaysan firfircoonida halkaasoo ay ka hubinayaan asturnaanta adeegsadayaashooda. Asal ahaan waxaa loo sameeyay sababaha bulshada iyo u dhaqdhaqaaqayaasha.
Maaddaama mabda'a aasaasiga ah ee adeegyada la bixiyay ay tahay asturnaanta iyo hufnaanta adeegsadaha. Waxay u noqotaa aalad aad u wanaagsan kuweenna jecel inay waxoogaa "khiyaano" ku yihiin shabakadda.
Sidoo kale. Kadib markaan diro dhowr codsi oo aan sharaxaad ka bixiyo sababta ay tahay inaan halkaas ku yeesho koonto. Waxay kajawaabeen bilo kadib bishaaro warkayga.
Hada waxaan ahay wiil faraxsan. 😀
Waxaan ku siinayaa safar yar oo ku saabsan adeegyada ay bixiso Kor u kacaan.!
2 Liiska boostada
Waxaan leenahay koonto emayl oo sugan. Halka aanu cidina aqrin doonin e-maylkeena ama kormeerayo nooca emayllada aan dirno ama helno.
Si aad u gasho adeegga aad isticmaali karto Liistka (Bogga qaabeynta waxay kugula talinayaan inaadan isticmaalin IE 😀). Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa macaamiisha sida Thunderbird , Evolution iyo wixii lamid ah.
Waxay la mid tahay mid kasta Maillististe halkee laga yaabaa inaad joogtay Kaliya waxyaabaha ka kooban liiska la sheegay ayaa ah kuwo gaar loo leeyahay oo aamin ah. Si aad uga mid noqoto liistada noocan ah, qasab maaha inaad haysato koonto Riseup ah. Markaa gal oo isku day qaar.
Sida qaarkood u ogaan doonaan oo u ogaan doonaan. A VPN (Vaan caadi ahayn Pdillaacin Network) had iyo jeer waa aalad aad u fiican oo aan la aqoonsan karin.
Hagaag, Riseup waxay ku siineysaa xisaab VPN ah. Hadana waad isticmaali kartaa.
Hadaynu eegno tayda IP
Sameynta fudud Ayaa.
Sida adeegga Gtalk oo kale. Had iyo jeer xaqiiqda ah fariimaha gaarka loo leeyahay.
Waxaa loo isticmaali karaa macaamiisha sida Pidgin ama wixii kale.
Xitaa haddii aad rabto inaad hirgeliso wax badan oo nabadgelyo ah. Isku xidhka TOR iyo VPN ayaa loo oggol yahay inay adeegsadaan server «ztmc4p37hvues222.onionztmc4p37hvues222.onion»
Aynu xusuusano tilmaamahaas .onion Waxaa la aqrin karaa oo keliya markaan isticmaalno TOR si aan u furno.
Ku haray wax sida:
Inbadan oo naga mid ah ayaa wax ka og adeeggan. Waa sida a Pastebin laakiin waqtiga dhabta ah. Halka aad ka arki karto qof walba waxa uu qoro.
Tani waxay la socotaa amniga iyo asturnaanta kiiska.
Waxaa jira laba siyaabood oo aasaasi ah oo koonto looga helo Riseup: Iyada oo casuumaad laga helay qof leh. Ama adoo codsi ka diraya Halkan
Kuma martiqaado qof walba waxyaabaha soo socda:
Waxaan rajeynayaa inaad fahantay 😀
Ma aanan dooneynin inaan si faahfaahsan uga hadlo sida aan wax walba u sameeyay. Waa hagaag, in la isku hagaajiyo VPN waxaa jira hanaan, Si loo xakameeyo TOR leh PRIVOXY waa nidaam kale. ka dibna daqiiqad kale waxaan ku sameyn doonnaa degenaansho dheeri ah.
Soo koobiddu waa tan aan awooday inaan ku helo koontadan. Waa la ogyahay inay tahay mashruuc socda oo ay wali jiraan waxyaabo badan oo la diiwaan galinayo iyo mashaariic badan oo la dhamaystirayo.
Waxaan rajaynayaa inaan xoogaa jeclaaday 😛
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Khibradeyda Riseup.net
Ha u dirin qof walba aniga uun haha
Maqaalka weyn, waxaan sugayay koonto muddo 1 bilood ah, si aan u arko haddii aan nasiib kula mid ahay you
Maxaan aniga ii caddayn oo ku saabsan emayllada ... miyay sidoo kale ku kaydsadaan gudaha xafiisyadooda? Mise maamulayaasha degelku ma heli karaan?
Ku jawaab sML
Waxaan doonayay inaan koonto ka sameysto RiseUp, laakiin markaan arkay inay server-yaashu ku sugan yihiin Mareykanka (Seattle) si wanaagsan, taasi way dhacday. Waxaan lumiyay koontadaydii Lavabit waxaana igu dhacay xisaab badan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadaad e-mayl u dirto qof aan adeeggan isticmaalin markaa dawlad kasta ayaa akhrin doonta. Markaa DHAMMAAN dadka aad la xiriirto ee adeeggan adeegsanaya mooyaane isku mid ayaa looga tegayaa. Tan iyo inta ku dhow qof walba wuxuu isticmaalaa GMail, Yahoo! iyo Hotmail, waxaad tahay rootiga.
Waxa ugu fiican ayaa ah inaad adeegsatid adeeg caadi ah oo aad kuqariso wax kasta oo aad dirto waana intaas. Mana ahan ZIP laakiin waxyaabo badan oo awood badan iyo lambar sir ah oo wanaagsan ayaa si fiican loogu duubay si loo fahmo. PGP ama wixii lamid ah tusaale ahaan.
Ama samee waxa Richard Stallman sameeyo: isticmaal waraaqaha dhaqameed oo mararka qaarkood emaylka ugu dir server-kaaga.
Si daacadnimo ah, weligey sidaas kuma arag, waxaanan mar horeba si dhab ah uga fikirayay sidii aan u heli lahaa koonto emayl mid ka mid ah adeegyadaas, laakiin faalladaadu waxay iga dhigtay inaan laba jeer ka fikiro oo aan arko aragtidaada waxaan u maleynayaa inaad sax tahay, oo aad koonto ku leedahay halkaas Faa'iido maleh haddii dadka aad email u diri laheyd adeegsiga adeegyada caadiga ah.
PS: Waxaan u maleynayaa inaan sifiican usii isticmaali lahaa akoonkeyga gmail hahahaha xD
Laga soo bilaabo waayo-aragnimadayda, laba isku day, laba jeer diidmadaada. Waxaan doorbidaa inaan aasaaso adeegeyga oo sidaas ayaan ku sameeyaa waxa aan rabo, sida haddii aan doonayo inaan sameeyo nidaam kaydinta daruuraha. Asturnaan ka badan xalkaaga, waxba ma jiraan.
Hilibka dystopic dijo
Riseup.net waa tan ugufiican waxaanan lajoogey mudo 3 sano ah waligeyna ka qoomameyn maayo, wargeysyadeeda ayaa ah kuwa macluumaad badan bixiya adeegyadeedana waxaa dhiiri galiya kaliya sababo bulsheed waana sida ay tahay inaan kor ugu qaado internetka aduunka. 🙂
Ku jawaab Distopico Vegan
Waxaan beryahan xiiseynayay amniga. Wixii Giskard ka faallooday waxay ila noqdeen kuwo xiiso leh. Haddii qof kasta oo aad la xiriirto uu adeegsado nidaamka boostada caadiga ah, sida kiiskeyga, dhib malahan haddii aad cinwaan ku leedahay OpenMailBox ama Mailoo ama RiseUp. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa kale ee kale ay yihiin, sida email encryption. Ma aqaano sida loo sameeyo taas. Ma gmail lafteeda baa, tusaale ahaan, mise Thunderbird?
Waxaad kuheleysaa qalabka loo yaqaan 'enigmail plugin' ee loogu talagalay Thunderbird.
Mise waxaad isticmaashaa Icedove >> http://i.imgur.com/FzmeZnW.png
taasi waa haddii aad ku jirtid debian ama qaar ka mid ah distro oo xirxiraya.
Oo muxuu amaan u yahay ??, inuu kaga duwan yahay server-yada kale?
Ku jawaab Ruby
laakiin adeegeyaashu waxay ku sugan yihiin Mareykanka: haa
Taasi waa waxa uu sheegi lahaa.
Sababtaas awgeed, waxaan ka sii fiicnaan lahaa inaan doorto OpenMailBox oo adeegyadeeda ku leh Faransiiska
Aniga ahaan waxay ii ahayd wax argagax leh inaan ka beddelo hotmail una wareego gmail ... bal qiyaas tan.
Waad salaaman tahay, ma sameyn kartaa qoraal ku saabsan VPN iyo qaabeynta PRIVOXY fadlan
Haddii aad rabto asturnaan, ha isticmaalin adeegyada kaabayaashoodu ku yaalliin dalalka NATO ama xulafadooda.
Ku soo jawaab Korolev
Waa inaan cadeeynaa dhowr shay, oo in kastoo lagu dhajiyay boostada, laga yaabo inaysan si buuxda u cadeyn.
Adeegga 'Riseup' waa adeeg kaliya loogu talagalay dadka u dhaqdhaqaaqa, taas macnaheedu waa in ay adeegsadaan dad kuwaas, sabab kasta ha noqotee, ay ku silcin karaan dawladaha dalkooda.
Marka haddii aad tahay qof firfircoon oo kaliya haddii aad tahay, weydii koonto ku taal Riseup.
Waa adeeg iskiis loo maamuley macnaheedu maahan bilaash, waa inaad iska bixisaa. Samee nooc tabarucaad ah haddii aad awoodid. Haddii aadan awoodin, dabcan sidoo kale waad weydiisan kartaa koonto.
Boostada ayaa ku duuban server-yada kor u kaca, dowladda Mareykanka waxay lahaan laheyd amar ay ku qabato server-yadaas laakiin macluumaadka wali waa la xirayaa.
Gobolku dhowr jeer ayuu isku dayay, laakiin Riseup wuxuu isku muujiyey dacwado kala duwan, isagoo diidey inuu siiyo macluumaadka macaamiishiisa isla markaana ku guuleysto maxkamadeynta.
Waxaa jira kooxo kale oo iskood isku maamul ah oo isku nooc ah oo laga yaabo inaad xiiseyneyso:
http://www.autistici.org / Talyaaniga
Marsupi.org / Catalonia
node50.org / Isbaanish
PS: Kordhinta waxaad kaliya haysataa 25 megabyte oo saldhigga ah, marka waa inaad isticmaashaa maamulaha emaylka. Iyo dabcan, marwalba kuqor fariimahaaga PGP.
Miyuu qof i siin karaa casuumaad Riseup ... maamulku waqti dheer ayuu qaataa waxaanan ugu baahanahay si deg deg ah.
emailkaygu waa kraieoma@guerrillamailblock.com, lambarka sirta ah halkan isii
Markaa haddii aan doonayo inaan u sameeyo emayl adeegsiga gaarka ah (ma ihi qof u dhaqdhaqaaqa), ma awoodo? Salaan iyo mahadsanid.
Ka jawaab Opreno
Tijaabada Debian oo lagu daray KDE 4.10.5